Warar - Kiis Naqshad Cusub oo loogu talagalay akhristaha BOOX Nova
Kiis Naqshad cusub oo loogu talagalay akhristaha BOOX Nova
Kiis cusub oo loogu talagalay BOOX nova 3 midab akhristaha
Dad aad iyo aad u badan ayaa doorbidaya inay akhriyaan ebook-ka akhristaha. Way ku habboon tahay in lagu akhriyo buugaag badan buuggan akhristaha caatada ah. Walwal ha ka qabin inaad sidato buugaag waraaqo aad u culus ah, oo u baahan boos iyo lacag badan. Hadda akhriste BOOX waa mid ka mid ah akhristayaasha loogu jecel yahay. Waxay kuu noqoneysaa saaxiibkaaga ugu fiican shaqada iyo waxbarashada.
Waa tan kiiskeenna naqshadeynta cusub ee loogu talagalay akhristaha oo leh shaqooyin badan.
Waad jeclaan doontaa.
Kiiskani wuxuu isku daraa suunka gacanta, qalin qori iyo laad istaag ah, wuxuu ku hayaa akhristahaaga istaaga. Xor u yeelo gacantaada markaad wax akhrinaysid, sidoo kale cab kafee. Qalin-hayaha ayaa haya qalinkaaga markii aadan isticmaalin.
Naqshad casri ah oo leh kiiska maqaarka PU ee la xushay ayaa leh taabasho wanaagsan. Waa adkeysi in la isticmaalo, ilaali akhristahaaga muddo dheer. Gudaha microfiber-ka waa xoqin, wuxuu u dhigmaa midabka madow.
Kiisku wuxuu taageeraa hurdo otomaatiga iyo shaqada toositaanka. Markaad xirto daboolka, akhristahaaga wuu xirmayaa.
Markaad furtid daboolka, akhristahaagu si otomaatig ah ayuu u furayaa. Markaad u deg degto inaad baxdo, adigoo hurdaya, way fududahay inaad soo afjarto akhriskaaga.
Suunka gacanta ee laastikada ah, kiisku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku qabato hal gacan. Waad ku daawan kartaa gacanta, si sahlan oo aad u qaadan karto meel kasta. Wax kastoo adiga iyo ilmahaaga ah, waxay ku qaban karaan gacmahaaga si isku mid ah.
Kiisku si adag ayuu u xiran yahay. Ha ka welwelin xoqitaanka ka imanaya furayaashaada iyo walxaha kale ee fiiqan. Sidoo kale waxay nadiif ka dhigaysaa akhristahaaga maalmo badan.
Kiiska maqaarka ayaa si buuxda ugu wareegsan akhristahaaga qaaliga ah, wuxuu si fiican u ilaaliyaa.
Ka ilaali akhristahaaga dhibic iyo naxdin.
Waxay noqon doontaa saaxiibkaa wanaagsan ee akhristahaaga.
Dabcan, waxaan haynaa kiiska qaababka kale ee loogu talagalay akhristaha. Sida kiis caato ah oo khafiif ah, xariir kiiska midabka daabacay.
Iyo origami taagan kiis.
Waxaad u leedahay xulasho badan akhristahaaga.
Keebaa qaabka aad ugu jeceshahay?